आजको तस्वीर : दुर्लुङकोट भूमेमा उभौली पर्व ! – ebaglung.com
आजको तस्वीर : दुर्लुङकोट भूमेमा उभौली पर्व !
२०७६ जेष्ठ २९, बुधबार ०८:५९	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, विविध
शव्द/चित्र : सचिन्द्र श्रेष्ठ,
पर्वत कुस्मा २०७६ जेठ २९ । दुर्लुङ, साविक दुर्लुङ गाविस पछिल्लो स्थानीय तहको संरचना अन्तरगत कुस्मा नगरपालिका वडा नं ५ दुर्लङ नाम बाट परिचित दुर्लुङ गाउँ अधिकांश गुरुङबस्तीले ढाकेको छ । कुस्मा सदरमुकाम संग सटेर बसेको दुर्लुङका बासिन्दाहरु बन्द व्यापारका लागी कुस्मा बजार झर्ने प्रचलन छ । अहिले पनि कुस्मा बजारमा दुर्लुङ चोक भनेपछी नचिन्ने र थाहा नपाउने कोहि छैनन् ।
दुर्लुङ चिटक्क परेको गुरुङबस्ती रहेको गाउँ हो । दुर्लुङबासीको आफ्नै भाषा, भेष, भुषा र धार्मिक, साँस्कृतिक चाड पर्वहरु छन् जस्लाई स्थानीयहरु निकै उत्साह र उमंगका साथ मनाउदै आएका छन् ।
दुर्लुङमा ‘दुर्लुङकोट भूमेको मन्दिर’ छ । भूमेलाई भाकल गरे मनले चिताएको कुरा पुग्ने विश्वास रहिआएको छ । दुर्लुङकोट भूमेको मन्दिरमा प्रत्यक वर्ष विजया दशमीको दिन र जेठ शुक्ल नवमीको दिन ठुलो पर्व मेला लाग्ने गर्छ । दुबै पर्वहरुमा पर्वत जिल्लामात्र नभएर मुलुकभरबाट हजारौँ श्रद्धालुहरु भेला भएर वा पूजा सामाग्री वा बोकाहरु पठाएर भूमेको पूजा गर्ने धेरै पुरानो प्रचलन रहेको छ । दुर्लुङकोट भूमेमा गुरुङ लगायत विभिन्न जातजातिका मानिसहरुले उभौली पर्व र दशैँ पर्व मनाउदै आएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा जेठ शुक्ल नवमीको दिन हिँजो जेठ २८ गते मंगलबार दुर्लुङकोट भूमे मन्दिरमा हजारौँ श्रद्धालुहरु भूमेको पूजा अर्चना गरेका छन् । यसलाई स्थानीयवासी उभौली पर्वको रुपमा लिन्छन । वर्षा सुरु हुन थाले पछी उभौली पर्व मनाउने गरिएको बुढापाकाहरुको भनाई छ । गत २०७४ सालमा मलमासले उभौली पर्व असार महिनामा मनाएको स्थानीयले बताए । यस्तै प्रत्यक वर्ष जेठ शुक्ल नवमीको दिन हिँजो मंगलबार स्थानीय समुदायले वर्षात पहिले उभौली पर्व भव्यरुपमा मनाएका छन् ।
भूमेलाई स्मरण गरेर गरिएका भाकल (मनोच्छा) पूरा भएपछी बोकाको बलि सहित भूमेको पूजा अर्चनाका लागी देशका विभिन्न भागबाट भेला भएका हजारौ श्रद्धालुहरुका कारण हिँजो मंगलबार दुर्लुङको वातावरण निकै रमाईलो देखिएको थियो । त्यहाँ उपस्थित धेरैले हाम्रो मनले चिताएको कुरा पुगेकोले हामी दुर्लुङकोट भूमेको नाममा बलि चढाउन आएको बताएका थिए ।
यस वर्षको उभौली पर्वभा करीब १ सयको हाराहारीमा बोकाको बलि दिईएको स्थानीयले बताए । तर दशैँमा भने दुर्लुङकोट भूमे मन्दिरमा बोका र राँगाको बलि दिईने प्रचलन रहि आएको र उभौली भन्दा दशैँमा धेरै बलि दिईने स्थानीयको भनाई छ । वली सहीत फुल प्रसाद चढाएर पुजा सम्पन्न गर्ने चलन छ।